Thola imaski ezinhlanu ezenziwe ngokwenziwe zesikhumba | Bezzia
Amaski ama-5 enziwe ekhaya ukubonisa isikhumba sakho entwasahlobo
USusana Garcia | 01/05/2021 20:00 | Ubuhle, Imikhiqizo yobuhle
Uma sikhuluma ngamamaski emvelo nawenziwe ekhaya ukunakekela izinwele, manje sekuyisikhathi samaski sokwenza ngcono isikhumba sobuso noma somzimba kule ntwasahlobo. Lezi buso bungasetshenziswa nomaphi lapho sifuna khona zinhle kakhulu ekunakekelweni kwesikhumba. Ake sibone ukuthi singakwenza kanjani okunye okuthakazelisa kakhulu ukuba nesikhumba esifanele esingasigqoka ngezingubo zentwasahlobo.
I-Las amaski okuzenzela angenziwa ngazo zonke izinhlobo zezithakos. Singondla isikhumba ngezindlela eziningi, sisebenzisa imvelo esinikeza yona ukuze sithuthukise umzimba wethu. Lezi zinhlobo zamaski zilula ukuzenza futhi ziyasebenza kakhulu ngoba zenziwa ekhaya ngezinto ezimbalwa futhi zithuthukisa kakhulu ubuso nezakhiwo zayo zemvelo.
1 Imaski yokuvuselela isikhumba nge-oatmeal
2 Buso besikhumba esibucayi nge-aloe vera
3 Imaski ye-Astringent enelamula
4 Imaski yesikhumba esomile ngamafutha omnqumo
5 Ukukhipha imaski ngoshukela
Imaski yokuvuselela isikhumba nge-oatmeal
I-oatmeal iyisithako esisebenzela izinto eziningi. Akukhona nje kuphela ukuthi ukudla okunomsoco kakhulu okusetshenziselwa izindlela eziningi zokupheka, kepha futhi kunikela ngezinto ezinhle esikhunjeni. I- i-oatmeal inamandla athile okuqothula avuselela isikhumba ngoba ngasikhathi sinye iyayinakekela futhi isiza ukugcina umswakama kuyo. Ungasebenzisa uju oluthile ukuluxuba futhi uthole umphumela omuhle kakhulu. Uju lunamandla okusinikeza isikhumba amanzi futhi libuye lilwe nezinkinga ezifana nezinduna. Yizithako ezimbili okulula ukuzisebenzisa ezitholakala kalula. Yisebenzise nge-massage elula esikhumbeni bese ushiya imizuzu engamashumi amabili ukuyisusa ngokuhamba kwesikhathi.
Buso besikhumba esibucayi nge-aloe vera
I-aloe vera ingesinye sezithako zemvelo ozozisebenzisa kakhulu uma ufuna ukunakekela isikhumba sakho, noma ngabe siyini. Kunconywa kakhulu ngesikhumba esibucayi kakhulu ngoba kuyasiza thambisa, gcina isikhumba sibushelelezi futhi sihlanzekile, konke kusithako esisodwa. Ithoba isikhumba ngokubomvu futhi ungakusebenzisa njengelanga ngemuva kwelanga ukunakekela isikhumba sakho ngemuva kokushiswa yilanga. I-aloe vera engokwemvelo kakhulu itholakala kulesi sitshalo, isika amaqabunga futhi isuse ijeli abanayo ngaphakathi, kepha singayithenga kalula ezitolo zemifino esizoyisebenzisa esikhunjeni. Yisifihla-buso esithambisa isikhumba esibomvu futhi sisinikeze amanzi.
Imaski ye-Astringent enelamula
Isikhumba se-oily sizoba ne- inkinga ye-sebum eyeqile okugcina kukhiqize ukungcola okuningi. Esinye sezinyathelo zokuqala okufanele sizenze ukuzama ukulawula i-sebum eyakhiwe esikhunjeni. Yingakho imaski kalamula kalamula iphelele. Ingaxubaniswa noju oluncane noma iqanda elimhlophe, ngoba ziyathambisa kepha azifaki uwoyela esikhunjeni. Ilamula lingathinta isikhumba uma sivezwa yilanga ngokuhamba kwesikhathi, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa lesi buso ebusuku.
Imaski yesikhumba esomile ngamafutha omnqumo
Amafutha omnqumo ajwayelekile ekhishini lethu futhi futhi kuyisithako esinomsoco kakhulu engasetshenziswa kumamaski obuso. Iyathambisa kakhulu futhi akufanele isetshenziswe esikhunjeni esinamafutha, kepha ilungele leyo eyomile. Uma isikhumba sakho somile ungasebenzisa izipuni ezimbalwa zamafutha omnqumo neqanda elimhlophe ukuxuba. Uzothola isikhumba esinamanzi amaningi futhi esikhanyayo ngokusetshenziswa kwale maski.
Ukukhipha imaski ngoshukela
Ushukela, ngaphezu kokusetshenziselwa ama-dessert, yisikhuhla esikhulu. Uma uxuba okuncane nesipuni samafutha omnqumo uzoba nesikhombi esikhulu sesikhumba sakho. Ungayisebenzisa kuphela ezindebeni noma ebusweni. Massage bese uhlanza ubuso bakho njalo ngemuva kwalokho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Amaski ama-5 enziwe ekhaya ukubonisa isikhumba sakho entwasahlobo
Ukulungiswa okucacile kokudlala i-paddle tennis